Ahoana no ahafahan'ny ekipan'ny varotrao sy ny varotrao hampitsahatra ny fandraisana anjara amin'ny harerahana nomerika | Martech Zone
Ahoana no ahafahan'ny ekipan'ny varotrao sy ny varotrao hampitsahatra ny fandraisana anjara amin'ny harerahana nomerika
Alarobia, Febroary 16, 2022 Alarobia, Febroary 16, 2022 Douglas Karr
Fanamby tsy mampino ho ahy ny roa taona farany. Eo amin'ny lafiny manokana dia nahazo ny zafikeliko voalohany aho. Eo amin'ny sehatry ny fandraharahana, niara-niasa tamin'ny mpiara-miasa sasany izay hajaiko fatratra aho ary manangana consultant momba ny fanovana nomerika izay tena manomboka. Mazava ho azy fa teo afovoan'izany dia nisy areti-mifindra izay nanimba ny fantsona sy ny fandraisana mpiasa… izay miverina amin'ny laoniny izao. Atsipazo amin'ity publication ity, mampiaraka, ary fahasalamana… ary ny fiainako dia zoo amin'izao fotoana izao.
Ny zavatra iray mety ho voamarikao tato anatin'ny roa taona farany dia ny nampiato ny podcast-ko. Nanana podcast mavitrika 3 aho taona vitsy lasa izay - ho an'ny varotra, ho an'ny orinasa eo an-toerana, ary ho an'ny veterana mpanohana. Ny Podcasting dia fientanam-poko, saingy rehefa nijery ny taranaka mpitarika ahy sy ny fitomboan'ny fandraharahana aho, dia tsy nanome fitomboan'ny fidiram-bola eo no ho eo izany ka voatery nanilika azy aho. Ny podcast 20 minitra dia mety hanapaka hatramin'ny adiny 4 amin'ny andro iasako mba handaminana, handrakitra, hanova, hamoahana ary hampiroborobo ny fizarana tsirairay. Ny fatiantoka andro vitsivitsy isam-bolana tsy misy fiverenana avy hatrany amin'ny fampiasam-bola dia tsy zavatra zakako amin'izao fotoana izao. Fanamarihana sisiny… Handray anjara amin'ny podcast tsirairay aho raha vantany vao azoko ny fotoana.
Ny harerahana nomerika dia faritana ho toetry ny faharerahana ara-tsaina vokatry ny fampiasana tafahoatra sy miaraka amin'ny fitaovana nomerika maro.
Lixar, mitantana harerahana nomerika
Tsy afaka milaza aminao aho hoe firy ny antso an-telefaona, hafatra mivantana ary mailaka azoko isan'andro. Ny ankamaroany dia fangatahana, ny sasany dia namana sy fianakaviana, ary - mazava ho azy - ao amin'ny mololo dia misy mpitarika sy fifandraisana amin'ny mpanjifa. Manao izay tratry ny heriny aho hanivana sy hanao fandaharam-potoana araka izay tratrako, saingy tsy maharaka… mihitsy aho. Tamin'ny fotoana iray teo amin'ny asako, nanana mpanampy mpanatanteraka aho ary manantena an'io haitraitra io indray… Noho izany, amin'izao fotoana izao dia mijaly amin'izany fotsiny aho.
Mampifangaro ny asa ao anatin'ny sehatra izay ataoko mandritra ny andro, harerahana amin'ny fifandraisana nomerika dia mahasosotra ihany koa. Ny sasany amin'ireo hetsika mahakivy kokoa izay mandreraka ahy dia:
Manana orinasa mivoaka mangatsiaka aho izay manao automatique ara-bakiteny ny valin-kafatra ary mameno ny vata fatoriako isan'andro amin'ny hafatra adaladala toy ny, Mampiakatra an'io ho eo an-tampon'ny boaty fidiranao… na saron-tava mailaka amin'ny RE: ao amin'ny andalana lohahevitra mba hieritreretana fa efa noresahinay teo aloha. Tsy misy na inona na inona mahatezitra kokoa… Azoko antoka fa ny antsasaky ny boaty fatoriako amin'izao fotoana izao. Vao haingana aho no niteny azy ireo mba hijanona, dia tonga ny fihodinana automatique iray hafa. Tsy maintsy nametraka fitsipika vitsivitsy amin'ny fanivanana sy mailaka marani-tsaina aho mba hanandrana hitondra ireo hafatra manan-danja ao amin'ny boaty fidirana.
Manana orinasa sasany aho izay miala amin'ny fifandraisana amiko amin'ny alàlan'ny mailaka, avy eo mandefa hafatra amiko amin'ny tambajotra sosialy. Nahazo ny mailakao ve ianao? dia fomba azo antoka hanakanana anao amin'ny media sosialy. Raha noheveriko fa zava-dehibe ny mailakao, dia ho namaly aho… atsaharo ny fandefasana fifandraisana bebe kokoa amiko ary manakana ny fitaovana rehetra ananako.
Ny ratsy indrindra dia ny mpiara-miasa, ny namana ary ny fianakaviana izay tezitra tanteraka ary mino fa tsy mahalala fomba aho satria tsy mamaly. FENO ny fiainako amin'izao fotoana izao ary tena mahagaga. Tsy manome lanja ny zava-misy fa sahirana amin'ny fianakaviana, namana, asa, trano, fanatanjahan-tena, ary ny zavatra vitako aho dia tena mandiso fanantenana. Zaraiko izao ny ahy Calendly rohy mankany amin'ny namana, fianakaviana, ary mpiara-miasa mba hahafahan'izy ireo mamandrika fotoana ao amin'ny kalandrie. Ary arovako ny kalandrie!
Manomboka mahita orinasa maro kokoa aho SPAM ny hafatra an-tsoratra… izay tsy mahatezitra. Ny hafatra an-tsoratra no fomba fampitandremana sy manokana indrindra amin'ny fomba fifandraisana rehetra. Ny hafatra an-telefaonina mangatsiaka ho ahy dia fomba azo antoka mba tsy hanao raharaham-barotra aminao intsony.
Tsy irery aho… araka ny valin'ny fanadihadiana vaovao avy amin'ny PFL:
Ny mpitantana amin'ny alàlan'ny C-Level dia mahazo mihoatra ny 2.5 heny mmailaka fampiroboroboana isan-kerinandro, salan'isa 80 mailaka isan-kerinandro. Fanamarihana… Mahazo mihoatra noho izany aho ao anatin'ny iray andro.
Ny matihanina amin'ny orinasa dia mahazo a salan'isa mailaka 65 isan-kerinandro.
Mahazo ny mpiasa hybrid mailaka 31 isan-kerinandro ihany.
Ny mpiasa lavitra dia mahazo mailaka mihoatra ny 170 isan-kerinandro, mailaka mihoatra ny in-6 mihoatra noho ny mpiasa mahazatra.
Over ny antsasaky ny mpiasa rehetra miaina havizanana noho ny habetsahan'ny fifandraisana fampiroboroboana nomerika azony any am-piasana. 80% amin'ireo mpamaly C-level dia sahiran-tsaina amin'ny isan'ny fampiroboroboana nomerika azony!
Ahoana no iatrehana ny harerahana amin'ny fifandraisana nomerika
Ny fihetsiko manoloana ny harerahana amin'ny fifandraisana nomerika dia:
Mijanòna – Raha mahazo mailaka na hafatra mangatsiaka maromaro aho, dia teneniko ilay olona mba hijanona sy hanala ahy ao amin'ny database-ny. Matetika izy io no miasa.
Aza miala tsiny - Tsy miteny mihitsy aho "Miala tsiny ...” raha tsy hoe manantena aho fa hamaly ao anatin'ny fotoana voafetra. Anisan'izany ny fandoavana ny mpanjifa izay ampahatsiahiviko matetika fa nanomana fotoana hiarahana aminy aho. Tsy miala tsiny aho fa sahirana amin'ny asa feno sy ny fiainana manokana.
Fafao – Matetika aho no mamafa hafatra tsy misy valiny akory ary maro ny olona tsy miraharaha ny mamerina indray ny SPAM ahy.
Filter – Sivaniko ny endriko, ny boaty fidirana, ary ny fitaovana hafa ho an'ny sehatra sy teny fanalahidy izay tsy hovaliako mihitsy. Voafafa avy hatrany ireo hafatra. Mahazo hafatra manan-danja ve aho indraindray? Eny… eny ary.
laharam-pahamehana – Ny boaty fatoriako dia andiana Smart Mailboxes izay voasivan'ny mpanjifa, hafatra avy amin'ny rafitra, sns. Izany dia mamela ahy hijery mora foana ny tsirairay ary mamaly fa ny ambiny amin'ny vata fatoriako dia feno hadalana.
Aza elingelenina – Ny findaiko dia ao amin'ny Aza sarohina ary feno ny mail-ko. Eny… ankoatry ny hafatra an-tsoratra, ny antso an-telefaona no fanelingelenana ratsy indrindra. Ataoko miakatra hatrany ny efijerin'ny findaiko mba hahitako raha antso lehibe avy amin'ny mpiara-miasa, mpanjifa, na olona ao amin'ny fianakaviana izany, fa ny olon-kafa rehetra dia afaka mijanona tsy miantso ahy.
Inona no azonao atao mba hanampiana ny harerahana amin'ny fifandraisana nomerika
Ireto misy fomba valo ahafahanao manampy amin'ny ezaka amin'ny varotra sy ny fifandraisana amin'ny varotra.
Makà manokana – Ampahafantaro ny mpandray anao hoe nahoana ianao no mila mifandray aminy, ny fahatsapana ny maha maika, ary ny antony mahasoa azy. Tsy misy ratsy kokoa, araka ny hevitro, noho ny hafatra tsy misy dikany hoe “Miezaka ny hahazo anao aho…”. Tsy mampaninona ahy… Be atao aho ary nidina ho any amin'ny laharam-pahamehanao fotsiny ianao.
Aza araraotina ny Automation - ny hafatra sasany dia tena ilaina amin'ny orinasa. Ny sarety fiantsenana nilaozana, ohatra, dia matetika mitaky fampahatsiahivana vitsivitsy mba hampahafantarana ny olona fa namela vokatra iray tao anaty sarety izy. Fa aza tara loatra… Avelako ho an'ny mpanjifa ireo… andro iray, andro vitsivitsy, avy eo herinandro roa. Angamba tsy manana vola hividianana fotsiny izy ireo amin'izao fotoana izao.
Manàna faharetana – Raha te hanao automatique ianao na hanaraka dia ampahafantaro ilay olona. Raha namaky tamin'ny mailaka aho fa hisy antso mangatsiaka harahina afaka andro vitsivitsy, dia ampahafantariko azy ireo ny tsy hanahirana anio. Na hanoratra aho ary hampahafantatra azy ireo fa sahirana aho ary hikasika ny fototra amin'ny telovolana manaraka.
Asehoy ny fiaraha-miory – Efa ela aho no nanana mpanoro hevitra izay nilaza fa isaky ny nihaona tamin’olona izy tamin’ny voalohany, dia mody mody namoy ny ainy tao amin’ny fianakaviany izy ireo. Ny zavatra nataony dia ny nanitsy ny fiaraha-miory sy ny fanajana an’ilay olona. Te-hanao automatique ny mailaka ho an'ny olona any lavitra any amin'ny fandevenana ve ianao? Tsy dia inoako loatra izany. Satria zava-dehibe aminao izany, tsy midika izany fa zava-dehibe amin'izy ireo izany. Mahaiza miombom-pihetseham-po fa mety hanana laharam-pahamehana hafa izy ireo.
Omeo alalana - Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra amin'ny varotra dia ny manome alalana ny olona hiteny No. Nanoratra mailaka vitsivitsy ho an'ny prospects aho tato anatin'ny volana lasa ary manokatra ny mailaka aho amin'ny fampahafantarana azy ireo fa ity no mailaka tokana azon'izy ireo ary faly kokoa aho mandre fa tsy mila azy ireo. ny asako. Ny fanomezana alalana an'ilay olona hiteny hoe Tsia dia hanampy amin'ny fanadiovana ny boaty fatoriny ary ahafahanao tsy handany fotoana hampahatezitra ireo olona mety ho avy.
Safidy tolotra – Tsy te hampitsahatra fifandraisana mahaliana foana aho, fa mety te-hirotsaka amin'ny fomba hafa na amin'ny fotoana hafa. Omeo safidy hafa ny mpandray anao - toy ny fanemorana mandritra ny iray volana na ampahefatry ny volana, fanomezana rohy momba ny kalandrie ho an'ny fotoana iray, na misafidy amin'ny fomba fifandraisana hafa. Mety tsy ho azy ireo ny fitaovana na ny fomba fifandraisana tianao indrindra!
Mahazoa ara-batana – Rehefa mihena ny fanakatonana ary misokatra ny dia, tonga ny fotoana hiverenan'ny fihaonana mivantana amin'ny olona izay ahitana ny fifandraisana amin'ny fihetseham-po rehetra ilain'ny olombelona ifandraisana amin'ny fomba mahomby. Ny fifandraisana tsy am-bava dia tena ilaina amin'ny fametrahana fifandraisana… ary tsy azo tanterahina amin'ny alalan'ny hafatra an-tsoratra izany.
Andramo ny Direct Mail - Mety ho diso lalana ny fifindrana any amin'ny fampahalalam-baovao manelingelina kokoa mankany amin'ny mpandray tsy mamaly. Efa nanandrana media passive bebe kokoa toa ny mailaka mivantana ve ianao? Nahazo fahombiazana lehibe izahay tamin'ny fikojakojana ny ho avy amin'ny mailaka mivantana satria tsy dia betsaka loatra ny orinasa manararaotra izany. Na dia tsy lafo loatra aza ny fandefasana mailaka, dia tsy milevina ao anaty boaty mailaka miaraka amin'ny entana mailaka mivantana an'arivony ny entanao mivantana.
Na dia tsy horaharahain'ny mpanjifa toy ny doka nomerika na fipoahana mailaka aza ny mailaka mivantana tsy misy lasibatra, ny mailaka mivantana vita tsara dia afaka mamorona traikefa tsy hay hadinoina sy misy fiantraikany. Rehefa tafiditra ao anatin'ny paikady ara-barotra ankapoben'ny fikambanana, ny mailaka mivantana dia ahafahan'ny orinasa mitondra ROI bebe kokoa ary mampitombo ny fifandraisan'ny marika eo amin'ireo mpanjifa ankehitriny sy ho avy.
Nick Runyon, Tale Jeneralin'ny PFL
Misedra harerahana nomerika ny rehetra
Amin'ny tontolon'ny fandraharahana ankehitriny, henjana ny fifaninanana ho an'ny impression, clicks ary mindshare. Na dia eo aza ny fitaovana ara-barotra nomerika mahery vaika sy miparitaka eny rehetra eny, orinasa maro no sahirana amin'ny fahazoana vahana eo amin'ny mpanjifa sy ny ho avy.
Mba hahatakarana bebe kokoa ny fahasahiranana atrehin'ny orinasa maro amin'ny fisarihana ny sain'ny mpihaino, dia nanadihady matihanina orinasa maherin'ny 600 any Etazonia ny PFL. Ny vokatry ny PFL Fanadihadiana momba ny firotsahana ho an'ny mpihaino hybrid 2022 Hita fa mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny fahaizan'ny marika hanatratra ny mpihaino efa may ny tetika ara-barotra ara-batana, ny atiny ary ny tetika ara-barotra, toy ny mailaka mivantana.
Tsindrio eto raha hisintona ny infografika
Ny zava-bita lehibe tamin'ny fanadihadiana natao tamin'ireo matihanina orinasa maherin'ny 600 any Etazonia dia ahitana:
52.4% amin'ny mpiasan'ny orinasa Misedra havizanana nomerika vokatry ny habetsahan'ny fifandraisana nomerika azon'izy ireo.
Ny 80% amin'ireo mpamaly C-level ary 72% amin'ireo mpamaly mivantana dia manondro azy ireo mahatsapa ho tototry ny hamaroan'ny fifandraisana fampiroboroboana nomerika raisiny any am-piasana.
Ny 56.8% amin'ireo matihanina nohadihadiana dia mora kokoa ny manokatra zavatra voaray amin'ny alàlan'ny mailaka ara-batana noho ny mailaka.
Amin'izao toekaren'ny saina izao, lasa entam-barotra zara raha afaka misarika ny mpihaino sy mahazo ny firotsahany. Ny harerahana nomerika dia zava-misy ho an'ny olona maro, izay midika fa ny marika dia tsy maintsy mitady fomba vaovao hanentanana ny mpanjifa handray andraikitra. Ny fikarohana farany ataonay dia manazava ny tontolon'ny varotra B2B tena mifaninana amin'izao fotoana izao ary ny fomba ahafahan'ny orinasa mampiasa paikady hybrid mba hisongadina amin'ny mpanjifa sy ny ho avy.
Ity ny infografika feno miaraka amin'ny valin'ny fanadihadiana mifandraika amin'izany:
Fampahafantarana: Mampiasako ny rohy ifandraisako amin'i Calendly ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: 2022kalandrieharerahana amin'ny fifandraisana nomerikaharerahana nomerikamail mivantanafanadihadiana momba ny fifandraisanafanadihadiana momba ny fidiran'ny mpihaino hybridSary torohaylixar-barotrapersonalizationmailaka mivantana manokanamailaka manokanapflara-batana ara-barotra
Ahoana no fiantraikan'ny Apple's Mail Privacy Protection (MPP) amin'ny varotra mailaka?
Torohevitra SEO 6 manova lalao: Ny fomba nampitomboan'ireo orinasa ireo ny fifamoivoizana organika ho an'ny mpitsidika 20,000+ isam-bolana